Inbound Kushambadzira ecosystem | Martech Zone
Inbound Kushambadzira Ecosystem
Chitatu, December 21, 2011 Chitatu, December 21, 2011 Douglas Karr
Kumisikidzwa kwe DK New Media iri kunyanya kuti iri inbound yekushambadzira agency. Tinoda izwi iri inbound Marketing nekuti inosimbisa chokwadi chekuti tarisiro yedu iri kukwezva zvinotungamira uye nekuvashandura kuva vatengi. SEO makambani anowanzo tarisa pane chinzvimbo. Makambani emagariro anowanzo tarisa kune vateereri vakuru. MaAgency anowanzo tarisa pane dhizaini. Takatarisana nemhedzisiro yebhizimusi… uye tinogona kushandisa SEO, zvemagariro, email, nhare, vhidhiyo, dhizaini kana chero imwe nzira inotungamira tarisiro mune zvinotungamira uye zvinotungamira kune vatengi.
Inbound marketing inganzwika senge kushambadzira jargon, asi ini ndinoda chirevo uye ichi fananidzo nzira yekushambadzira yakabuda. Ivo vanhu vari Volinsky Kubvunza ndakagadzira yakakura infographic iyo inoratidza iyo ecosystem yeanoshanda inbound kushambadzira zano:
Tags: inbound Marketinginbound kushambadzira ecosysteminbound kushambadzira infographicinbound kushambadzira zano
Amazon Kupesana nenyika!
Zvita 22, 2011 na12: 30 PM
Ini ndinoda iyi infographic! Rinonyatsorova chipikiri mumusoro. Zvinotaridza sekuti tinotarisa bhizinesi redu kuburikidza nema lens maviri Isu tine iyo yekutengesa fanera lens inotarisana nedhora repasi uye inotungamira kuyerera kuburikidza neyedu bhizinesi modhi.
Ipapo iwe une iyi "Yekushambadzira ecosystem" lense - iyo inoratidzika chaizvo kunge yepamusoro-maonero efanera - mutsauko uri wekuti mushambadzi anotarisa pamitengo yekushandurwa yezvinyorwa zvakaburitswa uye anotsvaga kuisa zvemukati pazvinenge zvine kukosha kwakanyanya kunzwisisika. . Saka isu tinogadzira zvimwe zvirimo zvine mukana wakakura weiyo yekunze / mamiriro ekunze uye zvishoma nezvishoma tinowana zvakanangana nezvatinogadzira patinenge tichidzidza zvakawanda pamusoro pemunhu ari kuzvidya, sezvavanotamira vakananga pakati.
Icho chingori chiito chekutaura chemufananidzo unoyevedza 🙂 Unonyatsonzwika.